Oromoon gootaa fi qaroo isaa Artist Hacaaluu du’aan erga dhabee guyyaa 7ffa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoon gootaa fi qaroo isaa Artist Hacaaluu du’aan erga dhabee guyyaa 7ffa.
_ Oromoon gootota, qabsa’oota fi hayyoota akka Jawar , Bekale, Girma, Hamza, Ayale, Michael Borena, Lammii Eyasped , Dereje, gazexessitoota OMN fi kannen biroo heddu erga hidhaan ufi biraa dhabee guyyaa 6ffa.
_ Waajjirri miidiyaa Ijaa fi gurra ummata Oromoo ta’e OMN erga cufamee guyyaa 6ffaa.
_ Abiyyi Oromoo diina taasifachuu fi gaa’ila Oromoo wajji qabu ifatti erag diigee tureera. Ta’us hariiroon xinnoon gaa’ilaa booda turte guututti adda cituu ishee Oromoon hundi erga itti amanee fudhatee guyyaa 7ffa.
_ Abiyyi beekkamtii Oromoo tokkoon maletti Xoophiyaa humnaan bulchuu erga eegalee turus erga ifaan saba ajjeesuuf firinbii (ፍሽካ) afuufee guyyaa 7ffa qabateera
_ Qeerroo fi Qarreen, guutumatti Oromoon ajjeefamaa turuun ifa. Ajjeechaa Hacaaluu booda motummaan nama 166 ajjeesuu amaneera. Kan hin himanmne tilmaama beekuun nama hin dhibu. Hundaa oli duulli qindaa’aan ajjeechaa kun qeerroo jajjabee hiriiraa fi mormii sabaa qindeessan irratti kan xiyyeeffate ta’uu dagachuu hin qabnu. Duula sanyii balleessuttu ta’ara.
_ Oromoon kana hunda ajjeechaa fi hidhaan dhabee mana taa’uun salphina. Abadan biyya alaa fi keessattis manatti gallee hin teenyu. Abiyyis biyya sana bulchuuf hin deemu, hin hayyamnu. Nafxanyaan Abiyyi jedhamu baduu malee nageenyi Oromiyaa fi xophiyatti hin jiratu.
The situation in Ethiopia interview about the worse situation in Ethiopia, and studio rtn North America guest on mukhtar oromo